admin – Page 6 – Radio
November 5, 2018	46	Like
Taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa shaaciyay inuu duqeyn ka fuliyay deegaanka Araare ee Gobolka Jubadda Hoose 3-dii bishan, halkaasoo howlgalo ka wadeen ciidanka xoogga dalka. War saxaafadeed ka soo baxay Taliska Mareykanka AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay aheyd...
Dowlada Gaas maxay Qabatay maxayse kufashilantay
November 4, 2018	46	Like
Ayadoo Doorashada Puntland Ee 2019 ay ka harsanta mudo kooba ayaa Shscsb magaalada galkio siyaabo Kala duwan waxay uga hadleen Dowlada Uu hogaamiyo Dr Gaas waxay qabatay iyo waxay ku fashilantay Shacabka Magalada Gaalkio Oo lahadlay idaacada Codka Nabada...
C/risaaq Cumar “NISA waxay isku bedeshay Hey’adda lagu caburiyo, laguna cabsi geliyo siyaasiyiinta”
November 4, 2018	44	Like
Wasiirkii hore ee Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa ka jawaabay qoraal ka soo baxay Hey’adda NISA oo lagu hakiyay qandaraas la sheegay inuu saxiixay sanado ka hor. Xildhibaan C/risaaq Cumar ayaa sheegay...
November 4, 2018	34	Like
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horraysay waxaa uu dowladda Sucuudiga si toos ah ugu eedeeyay dilka weriye Jamaal Khashoggi. “Waxaannu ognahay in amarka lagu dilay Khashoggi inuu ka soo baxay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Sucuudiga,” ayuu...
September 19, 2018	182	Like
Wasaarada Gaashaandhiga ee dalka Ruushka ayaa Salaasadii shalay ku eedaysay diyaaradaha dagaalka ee Israel inay ka danbeeyeen khasaarihii ka dhashay diyaarad uu leeyahay militariga oo kusoo dhacday dalka Siiriya. Diyaarada Ruushka lahaa oo ahayd nooca wax basaasta ayey ku dhinteen...
September 19, 2018	97	Like
Labada hogaamiye ee dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Koonfureed ayaa maanta oo Arbaca ah heshiis ka gaaray qodobo muhiim ah kadib kulan labo maalmood u socday. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon ayaa booqasho sadex maalmood qaadan doonta ku jooga caasimada Kuuriyada Waqooyi...
September 19, 2018	126	Like
September 19, 2018	101	Like
September 19, 2018	67	Like
Diyaarad dagaal ayaa la sheegay in duqeyn ka geystay Iskuul iyo Isbitaal ku yaalla degmada Saakow ee Gobolka Jubadda Dhexe oo ka mid ah deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. Ugu yaraan saddex carruur ah ayaa ku geeriyootay, halka kuwo kalana ay...